Azafady mba ampidino ny pejy fitobiana | Martech Zone
Sabotsy, Oktobra 15, 2011 Alarobia, Oktobra 26, 2011 Douglas Karr
Izahay dia mijery hatrany ireo hetsika misy ifandraisany amin'ny mpihaino anay. Demo amin'ny Internet, fampidinana, webinar, podcast, fisoratana anarana amin'ny kaonferansa… tianay ny mahazo ny teny amin'ireo iray izay hita fa mendrika. Ny zavatra hitako foana hatrany hatrany, na izany aza, dia olana roa lehibe izay manasarotra (na tsy afaka atao) hizara ilay fiantsonana pejy:
Tsy misy bokotra fizarana - ny olana voalohany hitako tsy misy ny bokotra fizarana ara-tsosialy amin'ny pejy fiantsonana. Ny pejy fipetrahana dia toerana mety indrindra hizarana sosialy! Raha misoratra ho fisintomana na hetsika iray aho dia inoana fa zavatra tiako hizara amin'ny tamba-jotra izany.
Tsy misy marika sosialy - rehefa mizara rohy amin'ny Facebook na Google+ ianao, ny rafitra dia manaisotra lohateny, famaritana ary koa sary iray solontenan'ny pejinao. Raha toa ka voamarika tsara ny pejinao, dia toa tsara ny fampahalalana zaraina. Raha tsy eo izy dia misintona info avy amin'ilay pejy izay tsy marina matetika.
Handeha aho haka Eventbrite, rafitra iray izay nampiasaiko somary kely tamin'ny lasa. Ity misy fomba fampisehoana Eventbrite hetsika ho avy ho an'ny Fihaonana an-tampon'ny dada 2.0 (tamin'ny martsa). Toy izao ny hijerena amin'ny Facebook ny topi-maso:
Eventbrite dia mampifandray tsara ny bokotra fizarana ary mampiasa ny Open Graph Protocol hameno ny fampahalalana rehetra ilaina. Mampalahelo anefa fa ny Eventbrite dia tsy mamela anao hametraka ny sary tadiavinao amin'ny hetsikao. Fa kosa, apetrak'izy ireo amin'ny sary miaraka aminy ny sary. Yuck!
Ary ity no topi-maso mialoha ao amin'ny Google+:
Mampalahelo fa ho an'ny mpamorona tranonkala na aiza na aiza, Google dia tsy nanapa-kevitra ny hilalao miaraka amin'ny Open Graph Protocol fa kosa, mitaky ny mombamomba azy ireo manokana amin'ilay pejy araka ny voalaza ao amin'ny Bokotra Google+ pejy (jereo ny faran'ny pejy amin'ny fanaingoana ilay sombintsombiny). Vokatr'izany dia toa mahatsiravina ny sombin-tsary Eventbrite… misintona ny sary voalohany amin'ny pejy sy lahatsoratra an-tsokosoko.
hono, LinkedIn dia mampiasa ny Open Graph Protocol ihany koa, saingy mbola tsy hitako hoe tena miasa izy io. Hitako misintona sary tsara izy io indraindray, ary sary hafa avy amin'ilay tranokala izay nitazona cache mandrakizay. Ny LinkedIn dia mamela anao hanitsy ny lohateny sy ny famaritana. Noho ny antony sasany dia toa misintona ny lohatenin'ilay tranonkala fotsiny izy na inona na inona lohatenin'ny pejy napetraka ao amin'ny tag misy graf misokatra.
Fanamarihana iray raha mampiasa WordPress ianao handrafetana pejy fananganana. Nanatona an'i Joost de Valk aho, izay nanjary nahagaga Plugin WordPress SEO izay ahitana ny protokol graf misokatra ary nandefa azy ny fampahalalana ilaina hanampiana ireo meta meta Google+ ihany koa. Tokony hampiharina tsy ho ela izy ireo!